Blogs: आँपको फड्के, एक बिनासकारी कीरा ः कसरी गर्ने समाधान??
आँपको फड्के, एक बिनासकारी कीरा ः कसरी गर्ने समाधान??
आँपको फड्के कीरा ( ःबलनय ज्यउउभच ) अरु कीरा भन्दा डरलाग्दा छन् । यो आँपका सबभन्दा ठूलो शत्रु कीरा हो र यसले निक नै नोक्सान पु¥याएको पाईएको छ । यसले आँप खेती गर्ने क्षेत्रमा भयङ्कर आक्रमण गरके ोपाईएको छ । यो कीराले वर्षेनी लाखौँ रुपैँयाको क्षति पु¥याउँछ । तराईमा यस कीरालाई “मधुवा” भन्दछन् । पहिचानवयस्क कीरा सानो, शरीरको अगाडिको भाग चौडा र पछाडिको भाग तिखारिएको र करिव ३ मिलि मिटरको हुन्छ । यसको शरीरको रङ हल्का हरियोमा खैरो मिसिएको हुन्छ र ठाउँठाउँमा मसिना पहेलो र काला चिन्हहरुहुन्छन् । यिनका तिन जोडा खुट्टा मध्य पछिल्लो जोडा खुट्टा मोटा हुन्छन्...
प्रांगारिक आलु खेतीमा कालोखोस्टे रोग र त्यसको व्यवस्थापन!!
आलु नेपालमा धान, गँहु र मकै पछिको चौथो महत्वपूर्ण वाली मानिन्छ । यो वाली नेपालमा करिव डेढलाख हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ भने यसको औषत उत्पादकत्व १३.०९ मे.टे. प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसको उत्पादकत्व विकसित देशको तुलनामा निकै कम छ । जस्तै युरोपियन देशहरुमा आलुको उत्पादकत्व ४० देखि ४५ मे.ट. प्रति हेक्टर रहेको छ । आलुको उत्पादकत्व कम हुनुका थुप्रै कारणहरु मध्ये रोग पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । आलुको कालो खोस्टे रोग एउटा महत्वपूर्ण रोगको रुपमा आई रहेको छ । नेपालमा लगातार लामो समय सम्म आलु खेती गरिने ठाउँमा यसको प्रकोप बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । यो रोगले आलुको...
चोकर (Bran) : गाइभैसीलाइ मात्रै हैन अब तपाइको बच्चाको लागि पनि खुवाउनुहोस्!!
अहिले हाम्रा छोराछोरीको खान्की के छ ? मम, चाउमिन, बिस्कुट, ब्रेड, चिप्स । यी अधिकांश खानेकुरामा मैदाजन्य हुन् । मैदाजन्य परिकार धेरै छन् र स्वादिलो पनि लाग्छ । तर, स्वास्थ्यका लागि त्यती फाइदाजनक छैन । मैदाजन्य परिकारकै कारण उनीहरुमा मोटोपन, मधुमेह जस्ता अनेक समस्या देखापर्ने गर्छ । जबकी उनीहरुलाई स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त राख्ने हो भने चोकुरयुक्त वा फाइबरयुक्त खानेकुरा दिनुपर्छ । तपाईं/हामीलाई थाहै छ, फाइबरको मुख्य स्रोत मानिने चोकरलाई अंग्रेजीमा ब्रान पनि भनिन्छ । यसको नियमित सेवनले पेट सफा हुनुका साथै भोक लाग्ने गर्छ । यसको सेवनले कब्जियतको समस्या समेत कम हुन...
प्राइभेट कम्पनी कसरी दर्ता गर्ने? (प्रक्रिया र दस्तुर सहित) सबै जानकारी!
कुनै पनि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग सामूहिक रूपमा मिलेर कम्पनी खोल्न सक्छन्। कम्पनी प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी गरेर तीन किसिमका हुन्छन्।यी मध्ये कुनै पनि कम्पनी खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको किसिम अनुसार दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू फरक हुन्छन्। यो लेखमा भने हामीले प्राइभेट कम्पनी कसरी दर्ता गर्ने ? (कहाँ गर्ने, प्रक्रिया, दस्तुर आदि) भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। प्राइभेट कम्पनी बढीमा ५० जनासम्म शेयरधनीहरु मिलेर खोलेको कम्पनी हो। साथै एकल शेयर धनी भएको कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनी अन्तर्गत...
प्लाष्टिक ट्रेमा बेर्ना उत्पादन प्रविधि!!
कृषकले एउटै जमिनलाई लामो समयसम्म नर्सरीको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रथाले पनि रोग कीराको प्रकोप बढाउनुको साथै बेर्नाको गुणस्तरमा ह्रास आई उत्पादन र गुणस्तरमा गिरावट आइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत बेर्ना उत्पादनको विकल्पको खोजी विगतदेखि नै भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र खजुराले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले स्वस्थ वेर्नाको उत्पादनको लागि प्लाष्टिक ट्रेमा बाख्राको मल उपयुक्त हुने कुरा पहिचान गरेको छ। प्लास्टिक ट्रेमा बेर्ना उत्पादनका फाइदाहरु बीउको उमार प्रतिशतमा वृद्धि हुने । तरकारी उत्पादनमा १६ देखि २१ प्रतिशत...